Ukudubula isidumbu kufanele kubonakale njengesisetshenziswa sokugcina lapho kusetshenziselwa isikhathi esidlule bese kuhloswe ngomonakalo othize obangela abahlukumezekile. Kuphikisana nomthetho ukubulala noma ukuthatha izinhlobo ezithile ngaphandle kwemvume edingekayo, ngakho abalimi kumele baqinisekise ukuthi banemvume edingekayo yokuzingela lezi zilwane. Bazodinga futhi ukusebenzisa izibhamu ezinelayisense.
Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, umzingeli kufanele abe umshayeli wokudubula osebenzayo futhi umculi omuhle onguchwepheshe ekulawuleni izilwane. Abadubuli abampofu bayodala izinkinga kuphela. Ukuzingela kufanele futhi kusungulwe ngokushesha ngangokunokwenzeka emva kwesigameko sokudalwa kwangaphambili, ukuqinisekisa ukuthi isilwane esinecala sibhekiswe.
I-Landmark Foundation kuPredators on Livestock Farms, i-Practical Farmers’ Manual for Non-lethal, Holistic Ecological Acceptable and Ethical Management, ixwayisa abalimi ngokuzikhokha ukuzingela umzingeli okhokhelwayo ngenhloko yezilwane ezibulalayo, njengoba lokhu kushukumisela abazingeli ukuba babulale abaningi izilwane ezidliwayo ngangokunokwenzeka esikhundleni somonakalo obangela isilwane. Ukudonsa izilwane ngokungakhethi kungaphazamisa amaqembu okuqashwa futhi kubangele izinkinga ezimbi.
Ngokusho kweNcwadi Yokuphathwa Kwadlezinye, ukuzingela ebusuku kuphumelela kakhulu, ngoba kuyizinto eziphilayo-futhi umuntu angenza ngokushesha uma kunenkinga. Imizamo kufanele ithathwe ukuze ihlose ukulimala okubangelwa izilwane hhayi ukudubula izimpungushe, ama-aardwolves noma ama-African Wild Cats. Izibani ezinezihlungi ezibomvu zisebenza kangcono njengama-searchlights. Izibani ezimhlophe zizokwenza izilwane ziqaphele futhi zivame.
Abalimi kudingeka baqinisekise ukuthi banezimvume ezidingekayo uma befuna ukuzingela e-helicopter, ngoba imithetho ehlukene isebenza ezifundazweni ezahlukene. Ngesikhathi ukuzingela e-helicopter kungaba nempumelelo kakhulu ikakhulukazi ekufinyeleleni izindawo nasezindaweni ezibanzi, ukungenelela okubiza kakhulu.
Izinja kufanele zisetshenziselwe ukulandelela izilwane ezidliwayo futhi zingase zingabulali noma zingathintana nomzimba. Izinja kufanele ziqeqeshwe kahle futhi ziphethwe ukuqinisekisa ukuthi azibangeli umonakalo kunoma yiziphi ezinye izilwane ngenkathi zilandelela izidumbu.
I-Predation Management Manual ikhuthaza abalimi ukuba bahlale izinja ekuhlaleni kuze kube yilapho isilwane esilitshekile sibonakala bese sikhulule izinja ukuba zixoshe inyamazane. Izinja kufanele zigcinwe kahle, ukuze zingalandeli futhi zizingele umdlalo ngoba zilambile. Ngesinye isikhathi izinja zizungezile ukuqinisekisa ukuthi azibangeli umonakalo.
Abazingeli bangafaka amabanga amakhulu ukulandelela izilwane ezihamba ngehhashi kunokuhamba ngezinyawo, ikakhulukazi ezindaweni ezinesihlabathi ze-Kalahari. Bangasebenzisa izinja ukuzisiza ukulandelela izilwane.